हाइड्रोपावर कम्पनीको कारोबारमा प्रभाव पार्ने हल्ला के हो ? कारण यस्तो छ विस्तृतमा बुझौं - DURBAR TIMES
HomeShare Bazarहाइड्रोपावर कम्पनीको कारोबारमा प्रभाव पार्ने हल्ला के हो ? कारण यस्तो छ...
हिजो अर्थात असोज १०, २०७८ मा विद्युत नियमन आयोगले हाइड्रो कम्पनीहरूको सेयर निष्कासन, बिक्री र बोनसका लागि नयाँ नियम ल्याएपछि अहिले सेयर बजारमा तरंग ल्याएको छ। त्यसमा पनि हाड्रोमा लगानी गर्नेहरुमा त्रास र अन्योलको माहोल सिर्जना गर्न केहि व्यक्ति सामाजिक संजालमा लागि परेर लागेको भेट्टाउन सकिन्छ।
हल्लाको पछाडी लाग्नु भन्दा वास्तविकताको अध्ययन आफैं गरेर, पाठकको निर्णायक क्षमता बढोस भन्ने उद्देस्यका साथ विद्युत नियमन आयोगले ‘विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मा गरेको विभिन्न नयाँ व्यवस्था बारे जानकारी प्रस्तुत छ ।
Previous articleमानुषी लघुवित्तको शेयर आजबाट कारोबारमा आउने, कति छ ओपनिङ्ग रेञ्ज ?
Next articleप्रभु बैंक लिमिटेडले संस्थापक शेयर विक्री गर्दै